Wedzera Kubhadhara NeKudhira Shanduko
Chitatu, October 28, 2020 Chitatu, October 28, 2020 Chris Bross
Mutengi anoburitsa shambadziro yakabhadharwa inosimudzira a kurumidza kutaura mu shambadziro… iko kufona kunoendeswa kunzvimbo yekufonera uko quote haina kupihwa. Oops. Mumwe mutengi anotenderera mazwi akakosha kazhinji sezvo vasiri kuwana shanduko. Oops… fomu yekutenga inoendesa kune peji risina kuwanikwa. Asi mumwe mutengi anosanganisira CAPTCHA pane inotungamira fomu yechizvarwa… iyo isingamboshanda. Oops.
Iyi yese mienzaniso inodhura makambani zviuru zvemadhora mumabhadharo ekutsvaga akabhadharwa. Kwete chete izvo zvakakonzera kurasika yakananga mari, ivo zvakare vakashungurudza tarisiro vangangodaro vasingazombodzoka.
Kana webhusaiti yekutengesa kana zvinotungamira zvikasaitika, makambani anowanzo nongedzera kune avo kushambadzira kwepamhepo matanho senge akaipa. Yako epamhepo mishandirapamwe inogona kurova zvavanoda… asi zvakadaro ichitadza nekuda kwekutadza kuuraya kumashure-kumagumo.
Aya matanho gumi ekukunda Shanduko neKubhadhara Kutsvaga
Ita shuwa kuti iwe une analytics mhinduro munzvimbo (uye shandisa iyo).
Bvumira chinangwa chekutevera (inozivikanwawo seecommerce yekutevera). Kana iwe uchingoteedzera zvinangwa, ipa kukosha kune yega yega chinangwa chakateedzerwa.
Activate chinangwa chekushandura fannels pachiyero chimwe nechimwe. Ongorora kuita nesosi, mushandirapamwe, kushambadzira, musimboti, uye chero chimwe chikamu.
Mukati meAdWords, Ad Center, kana mamwe maAccount, ita shuwa kuti kutendeuka kuteedzera iri uye iri kushanda nemazvo.
Kazhinji ongorora mashandiro metric, kwete chete mukati maakaundi ako
Edza dzimwe KPIs, kusanganisira bounce mitengo, avhareji mapeji pakushanya, uye avhareji nguva pane saiti pachinhu chega chega chemushandirapamwe. Zvemukati zvisirizvo pane yako saiti kana peji yekumhara zvinogona kukanganisa maitiro emakampeni.
Ongorora Checkout maitiro pachezvangu kana kuita kuti mumwe munhu aite se Chakavanzika Shopper kufumura matambudziko.
Edza kugona kwako zadzisa zvaunoda zviito (unogona kubudirira kupedzisa odha repamhepo kana kukumbira bhuku / bhurocha, nezvimwewo). Izvi zvine musoro kwete kwete chete kubva kune zviri kushanda here chimiro, asi zvinokubatsira kuona zvingangoitika zvevashandisi / nyaya dzekushandisa dzinogona kugadziriswa kana kuvandudzwa pamusoro
Kana chiyero chako chepedyo chichivimba netarisiro inofamba kuburikidza ne chirongwa chekurera, eg email kana runhare, ongorora izvi futi. Zvekare, hazvisi zvingani zvinotungamira zvaunogadzira asi zvaunoita nazvo.
Unogona kutora mhedziso zvisirizvo nezvekuti iwe unofunga zvisina kunaka sei mishandirapamwe yako ichiitwa kana uchiongorora yavo data seti chete, gadzira kuyedza saiti yako chiitiko.
Mutengo webudiriro kusvinura kusingaperi. Ita shuwa kuti zvinhu zvinoshanda! Yako webhusaiti chikamu chebhizinesi rako, kwete rakaparadzaniswa naro. Kana mutungamiri wechizvarwa Zvakakosha, usamire pakuteedzera vhoriyamu yemutungamiri wako, asi tarisa migumisiro. Mune zvimwe zviitiko, uko kunatsiridzwa kuchidikanwa / kuchidikanwa, kuitiswa kwako pamhepo kungave iri nyaya. Usaite zvekufungidzira.
Tags: nzvimbo yekushambadziraadwordskutendeuka funnelsecommerce yekuteverachinangwa chekushandura fannelschinangwa chekuteverakpismutungamiri wechizvarwakutungamira vhoriyamukuvandudza kushambadzirayakabhadharwa kutsvagaakabhadhara yekutsvaga optimizationmashandiro ekuitappcppc maakaunzi
Chris ishamwari ye EverEffect, kushandisa Bhadhara Per Click Akaunti Management, SEO Kubvunza uye Web Analytics. Chris ane anopfuura makore gumi nematanhatu eInternet ruzivo nemakambani eFortune 16 uye hunyanzvi kutungamira nekushandisa zviitiko zvepamhepo kusimudzira bhizinesi, zvigadzirwa nemasevhisi. Hunyanzvi hwaChris hunosanganisira; Mutengi Wepamhepo Kuzvishandira, Yekutsvagisa Injini (SEO), Yekutsvaga Injini Yekushambadzira (SEM), E-commerce, Kuwana Kwevatengi Kwepamhepo, Maitiro Ekushandurwa, Kugadzira Matanho eInternet, Online RoI Kuyera.
Kukadzi 8, 2011 na1:17 PM
Chinyorwa chikuru. “Tevera zvaunoda kuvandudza”
Mar 26, 2014 pa 11: 40 PM
Heino tip yandiri kushandisa for my local biz its called day-parting. takachengeta mari yakawanda asi tichironga kuti kushambadzira kwedu kuoneke panguva dzebasa chete dzezuva. Ini ndinofungidzira pane shumo (pasi pezviyero tebhu kana ndikarangarira nenzira kwayo) iyo inokutendera kuti uongorore CPC uye mutengo wekushandurwa neawa yezuva kuti ugone kungoshambadza panguva dzepamusoro. Isu takatotanga maitiro ekuwedzera mabheti edu panguva idzo dzepamusoro maawa ekusundidzira kunze vakwikwidzi vedu panguva iyoyo uye isu takazopedzisira tadzikisa mutengo wakazara nekuita izvi zvakare sezvo yakanyanya kunangwa. Ndiri kutoita kuti shamwari yangu Simon atonge account yedu yeadwords, kana uchida kutaura naye ingomutumira email pa. simon.b@resultsdriven.org kana 302-401-4478. Muudze shamwari dzako naDean Jackson.